Ahịa na Mac mini, enwere ike mmeghari akụrụngwa? | Esi m mac
Ahịa na Mac mini, enwere ike mmeghari akụrụngwa?
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya anyị natara ọtụtụ akụkọ banyere mmeghari ohuru nke Mac. Ikekwe, mmeghari ohuru a malitere site na MacBook Pro nke 2016. Ọ gara n'ihu na ozi sitere n'aka ndị isi Apple, banyere mmeghari ohuru nke Mac Pro na ohere nke iMac Pro, nke ga-anọchi iMac 5k dị ugbu a. Agbanyeghị, anyị nwere obere ozi gbasara obere Macs. Ka ọ dị ugbu a, ọdịnihu nke Macbook Air, yana Mac mini, amaghị.
Ọ dị mma na Apple na-emegharị obere Mac site n’oge ruo n’oge. Nke mbụ, n'ihi na ọ bụ ndị ntinye maka ndị niile chọrọ ịnwale Mac, ma kpebie ma ọ ga-eme ka ha kwenye, rụọ ọrụ na MacOS ma họrọ maka otu nwere ọtụtụ atụmatụ. Na nke abụọ, ọ bụ ngwaọrụ zuru oke maka ndị hụrụ Mac n'anya mana ha họọrọ iji ihuenyo, keyboard, wdg hazie ya.
Taa, anyị maara dị ka nnukwu ebupụta Ha ejirila euro 160 gbadaa obere etiti Mac mini, nke dị 20% obere. Ọ bụ ìgwè dị ike, nke na-enyekwa ọtụtụ njikọta. Maka ihe karịrị € 600 anyị nwere Mac mini nwere 5 GHz i2,6, 8 Gb nke RAM na 1 Tb HDD. Nke a bụ naanị otu azụ otu: Apple na-ewe ogologo oge iji megharịa Mac Mini, nke ka na-arịgo HDD. Naanị n'elu otu ndị otu nọkwasịrị Fusion Drive.
N'agbanyeghị nke ahụ, eỌ bụ akụrụngwa magburu onwe ya maka ọrụ ọfịs kwa ụbọchị ma ọ bụ dịka isi akụrụngwa maka ezinụlọ dum. O doro anya na ọ bụrịị otu egwuregwu na afọ ole na ole, nke a na-emekwa ka mbelata ego a belata. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị na - ere ahịa n’ahịa na - ekpebi iwetula ọnụahịa mgbe ha nwere ụdị ozi mmeghari ohuru. Nke ikpeazụ, Mgbe izu ole na ole fọdụrụ maka WWDC, ọ na-ajụ ma Apple ọ ga-ekpebi iwetara anyị mmeghari ohuru nke Mac mini, si otú a na-aga n'ihu na nkwa iji mee ka Mac dị nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ahịa na Mac mini, enwere ike mmeghari akụrụngwa?
Ọ dị mma, ha ebugogo ya, Mbelata ahụ adịgidebeghị ogologo oge 🙁
Jiri veilia maka nri vegan nke Emilia’s Vegan Recipe Mac
Tim Cook na Williams na TIME, June 5 isi okwu na-agba ume, ransomware, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac